Ukunikezela kunye nokukhutshwa komhla wokukhutshwa kwe-LG V50 ThinQ 5G | I-Androidsis
Umnikeli we-LG V50 ThinQ 5G ityhila konke ukubonakala kwayo: umhla wokumiliselwa osenokwenzeka ukwatyhilwe
AbakwaLGG kulindeleke ukuba babhengeze ubuncinci iifowuni ezimbini kwi-MWC 2019. Enye yazo iya kuba yi LG G8 ThinQ, isiphelo esiphezulu esele sivulekile kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, kunye I-LG V50 ThinQ 5G, iflegi eya kuba yeyokuqala yase-Korea yase-Korea eyi-5G. Ngoku, ukuhanjiswa okutyhilekileyo kutyhile ukuba injani le yokugqibela.
Umfanekiso obonisiweyo wabelwe kwi-Twitter ngu-Evan Blass (@evleaks) kwangoko ngale ntsasa. Inkqubo ye- I-LG V50 ThinQ 5G ibonakala inescreen esikhudlwana kunye nesibanzi kune G8 ThinQ. Nangona kunjalo, inenotshi, nangona iphepha lodonga lenza umsebenzi olungileyo wokuyifihla. Singahlula iikhamera ezimbini zangaphambili kunye nento ebonakala ngathi yimodyuli yokuvula ubuso. Iinkcukacha ezithe kratya apha ngezantsi.
Iphepha lodonga nalo lenze umsebenzi olungileyo wokufihla ubukhulu besilevu. Akukho slot ebonakalayo kwisithethi, ke siyayicinga loo nto i-terminal nayo iza kuza ne Itekhnoloji ye-G8 ThinQ OLED Crystal yesandi Esebenzisa isikrini ukupompa iaudiyo.
Ukunikezelwa kwe-LG V50 ThinQ 5G
Ngasemva, I-LG V50 ThinQ 5G inokuseta kathathu kwekhamera. Sicinga ukuba ngabo bathathu kuphela, kodwa ngekhe simangaliswe ukuba kukho inzwa yesine njengoko umphambili wefowuni uwela ngasemva. Indawo egqunyiweyo ibonakala inkulu ngokwaneleyo ukuba ingagubungela elinye igumbi. Abenzi boluvo bacwangciswe ngokuthe tye kunye nesibane se-LED. Kukho isivamvo somnwe phantsi kweekhamera kunye negama lefowuni iimilimitha ezimbalwa ngezantsi. I-logo ye-LG kwisilivere ibekwe ezantsi kwifowuni kwaye ilogo etyheli ye-5G ibekwe phezulu.
Ifowuni ineqhosha layo lokunene ngasekunene, ngelixa i-rocker yevolumu kunye neqhosha loMncedisi kaGoogle zisekhohlo. Asiboni emazantsi efowuni, kodwa kunokwenzeka ukuba inezibuko le-USB-C, isithethi kunye ne-3.5mm jack yomsindo.
Umatshini wokushicilela wenza okungaphezulu kunokusibonisa ukuba ifowuni ijongeka kanjani. Ulwazi oluye lwavuza nalo lutyhila umhla wokuqaliswa kwefowuni. Ixesha lithi 9:00 AM kwaye umhla yiCawa, ngoFebruwari 24, engempelaveki izayo. Nangona i-MWC ingaqali ngokusesikweni de kube ngumhla wama-25, abavelisi abambalwa baya kubhengeza iifowuni zabo ezintsha kusengaphambili.
El Iiflethi Iya kuqhutywa ngumqhubekekisi Snapdragon 855. Iya kuba kuphela kwi-Sprint e-United States.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Umnikeli we-LG V50 ThinQ 5G ityhila konke ukubonakala kwayo: umhla wokumiliselwa osenokwenzeka ukwatyhilwe
Ifoto yokwenyani yeXiaomi Mi 9 kwibhokisi eneenkcukacha zayo eziphambili kunye nokuqinisekisa uyilo lwangaphambili
Isamsung iya kuthatha ithuba lengxakeko ye5g ehamba ngayo uHuawei